လက်စွဲစာအုပ် အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > လက်စွဲစာအုပ် အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuator
လက်စွဲစာအုပ် အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး လက်စွဲ အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ linear လုပ်ငန်းလည်ပတ် အဆို့ရှင် ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင် နှင့် တူသော usages.AOX ပေးသွင်း အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-L ကို ကို စီးရီး လက်စွဲ အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် မြင့်သော perဘို့mance.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ထောက်ပံ့ သို့ အားလုံး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ client များ လှည့်ပတ် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကို။
AOX-L ကိုစီးရီးကို manual အပေါ်မှထပ်ချပ်လျှပ်စစ် actuator ၏ 1. မော်တော်
3. Valve ဆက်သွယ်မှု
ကွဲပြားခြားနားသော bracket ကကွန်နက်ရှင်မှတဆင့် AOX-L ကိုစီးရီးကို manual အပေါ်မှထပ်ချပ်လျှပ်စစ် actuator ကွဲပြားခြားနားသောအဆို့ရှင်အဘို့အသင့်လျော်စေနိုင်ပါတယ်။ သံမဏိစကေးအကဲအမှူးသံမဏိ slider ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-L ကိုစီးရီးကို manual အပေါ်မှထပ်ချပ်လျှပ်စစ် actuator ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
AOX-L ကိုစီးရီးကို manual အပေါ်မှထပ်ချပ်လျှပ်စစ် actuator အကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
hot Tags:: လက်စွဲစာအုပ် အပေါ်မှထပ် linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်